Kismaayo News » Jubbaland oo qabatay dhagar qabe ka soo baxsaday Puntland
Jubbaland oo qabatay dhagar qabe ka soo baxsaday Puntland
Kn: Ciidamada amaanka ee Jubbaland ayaa gacanta ku soo dhigay dhagar qabihii falka foosha xun ee kufsiga iyo jariimada isugu jiray ka soo gaystay Puntland.
Dhagar qabahan oo ahaa askari ka tirsan ciidamada Puntland ayaa ku kacay fal argagax galiyay bulshada, kuna cusub dhibaatooyinka loo gaysto dadka biri magaydada ah, gaar ahaan dumarka kadib markii uu inta gabar kufsaday hadana xubinta taranka xabad ooga dhuftay.
Nin kan oo u soo baxsaday dhinaca Jubbaland ayaa ciidamada amaanka oo ka warhelay, muddana ku raad joogay waxay maanta gacanta ku soo dhigeen asagoo ku mirqaamaya deegaanka Qandal. Laamaha amaanka Jubbaland oo isticmaalaya sirdoon kooda ayay u suuro gashay in dhagar qabaha la soo xiro.
Lama oga in nin kani lagu maxkamadayn doono Jubbaland iyo in loo celin doono deegaankii uu danbiga ka soo galay ee Puntland, waxayse qabashada dhagar qabahani muujinaysaa in hadii Soomaalidu dhinac uga soo wada jeedsato la dagaalanka iyo ka hortagga dambiilayaasha aysan jiraynin deegaan ay ku dhuuntaan ama ku nabad galaan.